A Dhijitari Kushambadzira Roadmap ya2014
Muvhuro, July 28, 2014 NeChishanu, Gunyana 26, 2014 Douglas Karr
Dzimwe nguva zviri nyore kungoteedzera iyo ine dotti tambo iwe sezvaunenge uchitsvaga kuve nechokwadi chako chekushambadzira kwedigital chakaringana uye chakakwana. Iyi infographic, kurumbidza kwe Makumbo maviri, inovavarira kuita izvo chaizvo. Kufamba iwe kuburikidza ne kushambadzira mugwagwa yewebhu yako kuvapo, nharembozha, ecommerce, inobuda, inbound, zvemukati uye zvemagariro midhiya kushambadzira matanho.
Chinhu chimwe chakarasika mune ino infographic ndiko kugona kwemazano ese ekushandira pamwe. Semuenzaniso, kushandisa yako yemukati kushambadzira kumagetsi matsamba enhau akagadziridzwa enhare mbozha. Izvo hazvitsanangurirwe mune ino infographic asi ichinyatso kukosha kana iwe uchida kuzadza zvizere email uye kuona kuti maemail ako achiverengwa zvakanaka. Ini ndakanyora zvisati zvaitika izvo zvazvino digitaalinen midhiya chipangamazano iri yakawanda yekondakita, kuenzanisa mavhoriyamu echirongwa chega chega kugadzira mimhanzi inotapira, inotapira!
Kazhinji kazhinji, tinoona kuti kiyi yekushambadzira mushe haisi kuita zvese… iri kuenzanisa musanganiswa wemazano, kuwedzera kukonzeresa nekuita kuti vashande pamwe chete, uye nekunzwisisa huwandu hwesisitimu yega yega yekutanga kuitira kuti kuwedzere mhedzisiro. Izvo zvakati - ichi chichiri chikuru cheki cheki kuti uburuke uye uve nechokwadi kuti hapana chauri kupotsa! Iyi infographic inopawo mamwe manhamba kuseri kweiyo digitaalinen kushambadzira maitiro.
2014 Dhijitari Kushambadzira Roadmap
Tags: Content Marketingecommerceinboundkushambadzira mugwagwaYeMahara neThebhu Kushambadzirakubudaevanhu vezvenhaumbiri mbirikuvapo kwewebhu
Iyo Inotyisa 2014 CMO Nongedzo kune Yemagariro Landscape